रथयात्रा प्रकरणमा कहाँ चुक्यो प्रशासन ?
पर्व वसन्त महर्जन
रातो मत्स्येन्द्रनाथ रथयात्रा प्रकरणलाई अति संवेदनशील सांस्कृतिक कर्म नभई जातीय द्वेष र घृणा फैलाउने तत्वका रूपमा जसरी परिभाषित गरियो, त्यसले समुदायबीच आपसी समझ अझ बढाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ यात्राको शुभसाइत २९ भदौका लागि जुरेको छ। आज पाटन मंगलबाजरस्थित् सोह्रखुट्टे पाटीमा ज्योतिषीहरूबीच भएको छलफलपछि २९ भदौको साइतमा मुर्तिलाई अवतरण गराई बुङ्मती लैजाने निर्णय भएको हो।
रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ दिउँसो ३ बजे तानिने
यस वर्ष मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा गरेर विगतका वर्षझैँ गाःबहाल हुँदै जावलाखेल पुर्‍याउन सम्भव नदेखिएपछि रथलाई आज ललितपुर महानगरपालिका अगाडिको सोह्रखुट्टे पाटीसम्म तानेर राख्न लागिएको छ।
इन्द्र नभेटिने ‘इन्द्रजात्रा’ भन्नका लागि इन्द्रजात्रा भनिए पनि यो पर्वमा इन्द्र देउताको उपस्थितिमै विरोधाभास छ। जात्रामा इन्द्र नभई ‘यमाःद्यः’ देउता उभ्याइएको इतिहास छ। सामान्यतः इन्द्रजात्राको चर्चा गर्ने वेला स्वर्गका राजा इन्द्रकी आमालाई बसुन्धरा व्रत बस्न इच्छा भएको र त्यसका लागि चाहिने पारिजातको फूल लिन इन्द्रलाई पृथ्वीमा पठाएको कथा हालिन्छ। तर, यो कथा वैदिक साहित्यसँग मेल खाँदैन।
निषेधाज्ञाकै बीच रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ यात्रा शुरु (तस्वीरहरु) ‘वर्षा र सहकाल’ का देवताको रूपमा मानिंदै आएको रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ यात्रा यो वर्ष कोरोना संक्रमण महामारीका कारण हुन सकेको थिएन। लामो समयसम्म पुलचोकस्थित रथ खेलमा रहेको रथ यात्रा गराउन पाउनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शनमा उत्रेका स्थानीयले रथ तान्न थालेका छन्।
आज इन्द्रजात्रा, रथयात्रा स्थगन भएपछि पूजा गरेर मनाइँदै यस पटक कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञाका कारण इन्द्रजात्राको रथयात्रा स्थगन भएपछि पूजा मात्र गरेर मनाइँदैछ।
किन गरिन्छ उपाकू यात्रा ? इन्द्रजात्राको शुरुआती दिन भाद्रशुक्ल द्वादशी अर्थात् आज मनाइने उपाकू पर्वको सांस्कृतिक महत्व र ऐतिहासिकता खोजी गर्नैपर्ने भएको छ ।
दिदीबहिनीको दीर्घायुका लागि व्रत बसेर मनाइँदै 'अटवारी' पश्चिम नेपालका थारू समुदायले दिदीबहिनीको दीर्घायुको लागि मनाउँदै आएको पर्व अटवारी यो वर्ष पनि धुमधामका साथ मनाइरहेका छन्। यो पर्व मनाउनको लागि सुदूरपश्चिम सरकारले ७ भदौमा सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ।
१० तस्वीरमा खोकनाको रोपाईं जात्रा ललितपुरको खोकनाबासीले बुधबार रोपाईं जात्रा मनाएका छन्। खेतमा राम्रो उब्जनी र अघिल्लो वर्ष मृत्यु भएका आफ्ना परिवारका सदस्यको सम्झनामा मनाइने यो पर्व पछिल्लो समय देशैभर मनाउने गरिन्छ।
कोरोनाको त्रासमै छायाँनाथमा धामी नाच हिमाली जिल्ला मुगुमा वर्षेनि हुने धामी नाचलाई यो वर्ष कोरोना महामारीले पनि रोकेन । छायाँनाथ धामको तीर्थयात्रा शुरु भएसँगै प्रत्येक वर्ष साउन शुक्लपूर्णिमामा मुगुका विभिन्न मन्दिरमा लाग्ने मेलाहरूले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाए ।
रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथारोहण शनिबार
कोरोनाभाइरस महामारीका कारण अनिश्चित बनिरहेको ललितपुरको रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथारोहण शनिबार हुने भएको छ।
प्राचीन नेवार पर्व गथांमुगःलाई कहीं घण्टाकर्ण त कहीं गठेमंगल ‘न्वारान’ गरी अनेक कथा रच्न थालिएको छ। जुन सर्वदा गलत मात्र होइन, अपव्याख्या पनि हो।
गुरुपूर्णिमा: हिन्दू र बौद्धको साझा पर्व
बौद्ध समाजमा ‘धर्मचक्र प्रवत्र्तन दिवस’ मनाउने एउटा परम्परा अन्ततः गुरुसँग सम्बन्धित भएका कारण हिन्दू समाजमा प्रयुक्त शब्द ‘गुरुपूर्णिमा’ सँग बौद्धहरूलाई कुनै आपत्ति छैन।
निस्किएन होलीको ‘अल्बेलो बाराती’ होलीमा जन्ती र बेहुला बनेका उत्तिकै सिंगारिएका हुन्थे । आकर्षक र फरक पहिरनमा निस्किने जन्ती र बेहुला बेहुली लिन विराटनगरको गोल्छा निवास पुग्थे।
सम्यक् महादान अमूर्त सांस्कृतिक निधिका रूपमा रहेको सम्यक् पर्वबारे यथोचित प्रचारप्रसार गर्न सके नेपाललाई विश्वभरिका बौद्धमार्गीहरूको अपूर्व गन्तव्य बनाउन सकिन्छ।
दाजुभाइ नहुनेले तिहारमा मनाए ‘दिदीबहिनी टीका’ (तस्वीरसहित)
दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई लगाउने तिहारको ‘भाइटीका’ को दिन यस पटक धेरै चेलीबेटीले एक-आपसलाई नै टीका लगाएर मनाएका छन्। दाजुभाइ नहुनेले निधार खाली राख्नु वा अरुलाई दाजुभाइ बनाएर टीका लगाउनुको साटो नयाँ शुरुआत गरेको उनीहरु बताउँछन्।
तिहारमा मिष्ठान्न: टल्किने मिठाईले बिगार्ला स्वास्थ्य !
तिहारमा भाइटीकाको लागि मिठाईको माग जसरी बढ्छ, उसैगरी बजारमा मिसावट गर्नेहरुको धन्दा पनि चौपट्टै मौलाउँछ। तपाईंले स्वाद लिएर खाइरहेको मिठाईमा कति मिसावट छ र स्वास्थ्यका लागि कति हानिकारक हुनसक्छ भनेर अनुमान गर्नै सक्नुहुन्न।
तिहारका लागि डेढ अर्ब बराबरको भाइमसला आयात
भाईपुजामा प्रयोग गरिने भाई मसला करीब डेढ अर्ब मूल्यको आयात भएको व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ । १ अर्ब ४६ करोड ८३ लाखको भाई मसला विभिन्न देशबाट आयात भएको छ ।
तिहारमा साढे दुई लाख बढी माला भारतबाट ल्याइदै
तिहारमा बालबालिकालाई वर्णमाला उपहार
होटल र पार्टी प्यालेसमा तीज मनाउनेलाई कारबाही